Muxuu Ciise ugu dhintay? , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Shaqada Ciise si cajiib ah ayey u soo baxday. Wuxuu wax baray oo bogsiiyey kumanaan. Wuxuu soo jiitay dhagaystayaal aad u tiro badan wuxuuna saameyn badan ku yeelan karaa. Wuxuu bogsiin kara kumanaan kale haddii uu u tagi lahaa Yuhuudda iyo kuwa aan Yuhuudda ahayn ee ku noolaa meelaha kale. Laakiin Ciise wuxuu u oggolaaday shaqadiisu inay ku dhammaato si kadis ah. Wuu ka fogaan kari lahaa qabashada, laakiin wuxuu door bidaa inuu dhinto halkii uu ku sii fidin lahaa wacdigiisa dunida oo dhan. Waxbaristiisa ayaa muhiim ah, laakiin wuxuu u yimid oo keliya inuu wax baro oo keliya laakiin sidoo kale inuu dhinto, dhimashadiisana wuxuu ku sameeyay wax ka badan noloshiisa. Dhimashadu waxay ahayd qaybta ugu muhiimsan ee shaqadii Ciise. Markaan ka fikirno Ciise, waxaan uga fikirnaa iskutallaabta inay tahay astaamaha masiixiga, oo ah kibista iyo khamriga karaamada. Bixiyaheena waa Bixiye u dhintay.
Ku dhashay inuu dhinto
Axdigii Hore wuxuu inoo sheegayaa in Ilaah marar badan u muuqday binu aadamka. Haddii Ciise kaliya doonayay inuu bogsiiyo oo baro, wuxuu si fudud u “muuqan lahaa”. Laakiin wuxuu inbadan qabtay: wuxuu noqday bini aadam. Sabab? Si uu u dhinto. Si loo fahmo Ciise, waxaan u baahan nahay inaan fahamno dhimashadiisa. Dhimashadiisu waa qayb udub dhexaad u ah farriinta badbaadada iyo wax si toos ah u saameeya dhammaan Masiixiyiinta.
Ciise wuxuu yidhi "Wiilka Aadanahu ma uusan iman, in loo adeegayo, laakiin inuu isagu u adeego oo naftiisa u bixiyo badbaadada [Buuggii Bible iyo Elberfeld Bible: madax furasho] dad badan" Matth. 20,28) Wuxuu u yimid inuu naftiisa allabari u bixiyo si uu u dhinto; dhimashadiisu waa inay "iibsato badbaadada" dadka kale. Tani waxay ahayd sababta ugu weyn ee uu u yimid dhulka. Dhiigiisa waxaa loo daadshay kuwa kale.
Ciise wuxuu xertiisii ​​u sheegay silica iyo dhimashadiisa, laakiin sida muuqata iyagu ma aysan rumaysan isaga. "Markaas wixii ka dambeeyay, Ciise wuxuu bilaabay inuu tuso xertiisii ​​sida ay Yeruusaalem aadayaan oo ay dhibaato badan ku qabaan odayaasha, wadaaddada sare iyo culimmada, oo la dilo oo maalinta saddexaad la sara kiciyo. Markaasaa Butros gees u waday oo bilaabay inuu ku yidhaahdo, Sayidow, na badbaadi, Sayidow. Kaliya intaas ma heleysid! (Mat. 16,21-22.)
Ciise wuu ogaa inay ahayd inuu dhinto maxaa yeelay sidan ayaa loo qoray. "... Oo sidee uga qoran tahay Wiilka Aadanaha inuu wax badan u xanuunsan doono oo la quudhsan doono?" (Markos 9,12:9,31; 10,33; 34.) «Markaasuu ku bilaabay Muuse iyo nebiyada oo dhan, uguna caddeeyey waxyaalaha ku saabsan xaggiisa oo dhan Qorniinka oo dhan ... Sidaa darteed waxaa loo qoray Masiixu wuu silcin doonaa oo wuu ka sara kici doonaa kuwii dhintay maalinta saddexaad » (Luukos 24,27:46 iyo).
Wax walbana waxay u dhaceen si waafaqsan qorshaha Ilaah: Herodos iyo Bilaatos waxay sameeyeen oo keliya wixii gacanta Ilaah iyo go'aanku "hore u go'aansaday inay dhacaan" (Falimaha Rasuullada 4,28). Beertii Gethsemane wuxuu ku tukaday tukasho hadii jid kale uusan jirin; ma jirin (Luukos 22,42). Dhimashadiisu waxay muhiim u ahayd badbaadadeenna.
Halkee lagu qoray? Wax sii sheegidda ugu cadcad waxaa laga heli karaa Ishacyaah 53. Ciise qudhiisa ayaa soo xigtay Ishacyaah 53,12: "Waayo, waxaan idinku leeyahay, Waa inuu igu dhammaado waxa qoran, Isaga waxaa lagu tiriyey xaqdarrada. Maxaa yeelay wixii aan qoray waa la dhammaystiri doonaa » (Luukos 22,37). Ciise, oo aan dembi lahayn, waa in lagu tiriyaa dembilayaasha.
Maxaa kaloo ku qoran Ishacyaah 53? Runtii, wuu xannuunsaday cudurkeenna wuuna na saaray xanuunkayaga. Waxaan u maleynay inuu yahay kii dhibka u gaystay oo ilaahay ku ciqaabay. Laakiinse isagu wuxuu inoo dhaawacan yahay dembiyadeenna. Ciqaabtiisu waxay dul saarnaatay nabaadiino, aawadiisna nabarradiisii ​​waannu ku bogsannay. Dhammaanteen waxaan u hallaalnay sidii ido oo kale, qof walbana jidkiisii ​​buu fiiriyey. Laakiinse Rabbigu wuxuu ku tuuray dembiyadeenii oo dhan. (Aayadaha 4-6).
Isaga "waxaa lagu boobay xumaanta dadkayga ... in kastoo uusan khalad samayn ... Sayidku wuxuu doonayay inuu isaga ku dilo cudur. Markii uu naftiisa u bixiyay dhibane dambiile ... wuxuu qaaday dembiyadeedii ... wuxuu qaaday dembiyada kuwa badan ... oo wuxuu u duceeyey kuwa xumaanta ah » (Aayadaha 8-12). Ishacyaah wuxuu sheegayaa qof aan u silcin dembiyada kuwa kale, laakiin dembiyada kuwa kale.
Qofkani waa in "laga jaro dhulka kuwa nool" (Aayadda 8), laakiin taasi maaha dhamaadka sheekada. Waa inay “aragto nuurka oo ay badataa. Oo isagu aqoonyahankayga, oo ah midiidinkayga xaqa ah, wuxuu u abuuri doonaa caddaalad kuwa badan ... Wuxuu yeelan doonaa carruur wuuna noolaan doonaa (Aayadaha 11 iyo 10).
Wixii Ishacyaah qoray, Ciise wuu oofiyey. Wuxuu naftiisa ubixiyay idihiisii (Yooxanaa 10:15). Isaga dhimashadiisa wuu aqbalay dembiyadeenna, oo wuxuu ku xanuunsaday xadgudubyadeenna. waa la ciqaabay si aan nabad ugu helno Ilaah. Dhibaatooyinkiisii ​​iyo dhimashadii xanuunkeenna waxaa lagu bogsiiyey; Annagaa iska caddeynnay - oo dembiyadeenna waa laga qaaday. Runtaasina waa la ballaariyey oo qoto dheer Axdiga Cusub.
Geeri ceeb iyo sharaf dhac
Sharciga “Sharciga Kunoqoshadiisa 5:21,23 ayaa sheegaya in“ nin ka la deldelay Ilaah la habaaray ”. Aayaddan awgeed, Yuhuuddu waxay u arkeen inkaarkii Ilaah oo iskutallaabta lagu qodbay oo dhan, oo sidii Ishacyaah qoray, waxay u arkeen "inuu Ilaah laayay". Wadaaddadii Yuhuudda waxay u maleeyeen in tani ay cabsi gelinayso oo curyaamineyso xertii Ciise. Xaqiiqdii, iskutallaabtu waxay baabi'isay rajadoodii. Iyaga oo la khiyaanay, waxay qirteen: "Waxaan rajeynnay inuu isagu badbaadiyo Israa'iil" (Luukos 24,21). Sarakiciddii ka dib ayaa soo celisay rajooyinkeedii, oo mucjisadii Pentikostiga ayaa iyada ka buuxsatay geesinimo cusub oo ay ku shaaciso inay tahay badbaadiye in halyeey, sida caqiidada caanka ah, uu yahay antihero buuxda yahay: Masiixa iskutallaabta lagu qodbay.
“Ilaahii awowayaashayo,” ayuu ku dhawaaqay Butros hortiisa golaha sare, “wuxuu sara kiciyey Ciisihii aad geedkii ku deldelay oo dishay" (Falimaha Rasuullada 5,30). “Holz” Butros waxa uu ka dhigayaa ceebta geerida geesaha oo dhan. Xishoodu, ayuu yidhi, kuma jiifin Ciise - waxay ku salaysnaan doontaa kuwii iskutallaabta lagu qodbay. Ilaah waa barakeeyey isaga, maxaa yeelay, isagu istaahilo inkaartii uu ku dhacay. Eebbe dib buu u beddelay dhaleeceynta.
Bawlos wuxuu ku hadlayaa isla inkaarta ku dhex jirta Galatiya 3,13: «Laakiin Masiixu wuxuu inaga fogeeyey inkaartii sharciga, maxaa yeelay, waxay inoo noqotay wax inkaar ah; maxaa yeelay, waxaa qoran, 'Inkaaru ha ku dhacdo ku kasta oo qoryaha sudhan' ... »Ciise wuxuu inkaarnaa halkii aannu ahaan lahayn, si aan innagana uga baxno inkaarta sharciga. Wuxuu noqday wax aan ahayn, si aan u noqon karno wax aan ahayn. "Wuxuu isaga oo aan dembi aqoonin ka dhigay inuu dembi nagu noqdo aawadeed, inaynu noqonno xaqnimada Ilaah hortiis." (2 Kor.
Ciise wuxuu dembi inoo noqday si aan isaga u caddeyn karno isaga oo keliya. Maxaa yeelay, wuu xanuunsaday wixii aannu u qalanay, oo isna wuu inaga sii daayay inkaartii, iyo ciqaabta - sharciga. Ciqaabta waxaa saaran isaga oo nabad qaba. " Sababtoo ah wuxuu u adeegay ciqaabta, waxaan ku raaxeysan karnaa nabad xagga Ilaah ah.
Xertii waligood ma illoobin qaabkii ceebta ahaa ee uu Ciise u dhintay. Mararka qaar iyadu xitaa waxay diiradda saari jirtay wacdintaheeda: "... laakiin waxaan ku wacdinnaa Masiixa iskutallaabta lagu qodbay, Yuhuudda xanaaqsan iyo nacasnimada Gariigta" (1 Korintos 1,23). Bawlos xitaa wuxuu ugu yeedhay injiilka "hadalka iskutallaabta" (Aayadda 18). Wuxuu u sheegayaa Galatiya inay iska indhatireen aragtida Masiixa ee saxda ah: "Yaase ku sixray, kan nebi Ciise Masiix hortiisa lagu sawiray sidii kan iskutallaabta lagu qodbay?" (Galatiya 3,1.) Tani waxay ahayd farriinta ugu weyn ee injiilka.
Muxuu iskutallaabtu u yahay "injiilka", war wanaagsan? Sababtoo ah waxaa laygu soo furtay iskutallaabta oo dembiyadeenna la ciqaabay waxay mudan yihiin. Bawlos wuxuu diiradda saarayaa iskutallaabta maxaa yeelay waa furaha badbaadadeenna xagga Ciise.
Dib looma soo noolayn doonno oo ammaano illaa deynteenna dembiga ah laga bixinayo, markaan xaqnimada Masiixa lagu sheegay "Ilaah hortiisa". Kaliya markaa waxaan geli karnaa ammaanta Ciise.
"Anaga ahaan" Ciise wuu dhintay, ayuu yidhi Paul (Rooma 5,6: 8-2; 5 Korintos 14:1; 5,10 Tesaloniika); iyo "dembiyadeenna" wuu dhintay (1 Korintos 15,3; Gal. 1,4). Wuxuu "kor u qaaday dembigeenna ... jidhkiisa ilaa qoryaha" (1. Petr. 2,24; 3,18). Bawlos waxa kale oo uu yidhi waxaan ku dhintay Masiixa (Rooma 6,3-8). Rumaysad ayaynu ku leenahay dhimashadiisa.
Haddii aan aqbalno Ciise Masiix inuu yahay badbaadiyaheena, dhimashadiisa waxaa loo xisaabinayaa sidii annaga oo kale; Dembiyadeenna ayaa loo tiriyaa sida isaga, oo dhimashadiisuna waxay ku abaalmarineysaa ciqaabta dembiyadaas. Waxay u eg tahay sidii iskutallaabta lagu sudhnaa, sidii annaga oo ah kii ina habaaray ee dembiyadeenii ina keenay. Laakiin isagu wuu inoo sameeyey, iyo sababta oo ah wuxuu u sameeyay, waa inaan xaq ku lahaan karno, taasi waa, in si qumman loo tixgaliyo. Wuxuu qaadaa dembigeenna iyo dhimashadeenna; Wuxuu ina siiyaa cadaalad iyo nolol. Amiirku wuxuu noqday wiil tuugsanaya si aan amiir u noqonno.
Baybalku wuxuu leeyahay in Ciise madax furasho ah (dareenkii hore ee madax furashada: siideyn, iibsasho bilaash ah) annaga, laakiin madaxfurashada looma siin hay'ad qaas ah - waa weedho tusaale ah oo raba inuu caddeeyo inay ku kacday qiimo sare oo cajiib leh si uu noo xoreeyo. . "Si qaali ah baa laygu soo iibsaday," Bawlos wuxuu sharraxay madaxfurashadayada xagga Ciise: tani sidoo kale waa weedh tusaale ah. Ciise "wuu na iibsaday", laakiin "ma bixinin" cidna.
Qaarkood waxay yiraahdeen Ciise wuxuu u dhintay si uu u qanciyo xuquuqda aabihii ee sharciga - laakiin waxaad sidoo kale dhihi kartaa inuu ahaa aabaha qudhiisa ayaa ku bixiyay qiimaha isagoo diraya oo siiya wiilkiisa keliya (Yooxanaa 3,16:5,8; Rooma). Masiixu Ilaah qudhiisu wuu ciqaabay si aynaan u qasbanaan. «Sababtoo ah nimcada Ilaah waa inuu dhadhamiyo geerida qof walba» (Cibraaniyada 2,9).
Ka bax cadhada Ilaah
Ilaah wuu jecel yahay dadka - laakiin wuxuu neceb yahay dambiga maxaa yeelay dembigu dadka ayuu wax yeeleeyaa. Sidaa darteed waxaa jiri doona "maalin cadho" markay Ilaahay dunida xukumo (Rooma 1,18; 2,5).
Ku alla kii runta diida, waa la ciqaabi doonaa (2, 8). Ku alla kii diida runta nimcada rabbaaniga ah wuxuu ogaan doonaa hoos u dhaca Ilaah, cadhadiisa. Ilaah wuxuu rabaa in qof walba toobad keeno (2 Butros 3,9), laakiin aan toobad keenin wuxuu dareemayaa cawaaqibka dembigiisa.
Dembiyadeenna waa la cafiyey dhimashadii Ciise, dhimashadiisana waxaan uga baxnay cadhada Ilaah, ciqaabta dembiga. Si kastaba ha noqotee, tan micnaheedu maahan in Ciise jacaylka ka caraysiiyay Ilaah xanaaq badan ama, macno ahaan, "aamusnaan buu iibsaday". Ciise wuu cadhooday dembiga sida aabihii oo kale yahay. Ciise ma aha oo kaliya garsooraha adduunka ee jecel dambiilayaasha si aad u badan oo isagu wuxuu ku bixiyaa dembiga iyaga, wuxuu kaloo yahay garsooraha adduunka oo dhaleeceeya. (Mat. 25,31-46).
Markuu Eebbe ina cafiyo, isagu uun ma iska maydho dembiga mana iska dhigto inaanu weligiis jirin. Axdiga dhexdiisa oo dhan, wuxuu ina barayaa in dembiga laga adkaaday dhimashadii Ciise. Dembigu wuxuu leeyahay cawaaqib xumo - cawaaqib aan ku arki karno iskutallaabta Masiixa. Waxay ku kacday Ciise xanuun iyo ceebeyn iyo geeri. Wuxuu qaatay ciqaabtii aan u qalanay.
Injiilku wuxuu shaaca ka qaaday in Eebbe uu si cadaalad ah u dhaqmo markuu inaga cafiyo (Rooma 1,17). Isagu ma illoobo dembiyadayada, laakiin wuxuu ka adkaadaa xagga Ciise Masiix. "Ilaah wuxuu u yeelay rumaysad sida kafaaraggud dhiiggiisa in lagu caddeeyo xaqnimadiisa ..." (Rooma 3,25). Iskutallaabta ayaa muujinaysa in Ilaah yahay xaq; waxay muujineysaa in dembigu aad u culus yahay in la iska indhatiro. Waa ku habboon tahay in dembiga la ciqaabo, Ciisena wuxuu iskaa aqbalay ciqaabteena. Xaqnimada Ilaah ka sokow, iskutallaabta ayaa sidoo kale muujisa jacaylka Ilaah (Rooma 5,8).
Sida Isayos yidhi: nabad baynu la leenahay Ilaah maxaa yeelay Masiix baa la ciqaabay. Waxaan mar hore ka fog nahay Ilaah, laakiin hadda waxaan ugu soo dhoweynay isaga xagga Masiixa (Efes. 2,13). Si kale haddii loo dhigo, waxaan Ilaah kula heshiinnay iskutallaabta dusheeda (Aayadda 16). Waa aaminaad aasaasi ah oo masiixiga rumeysan tahay in xiriirka aan la leenahay Ilaah uu ku xiran yahay geerida Ciise Masiix.
Masiixiyadda: kani ma aha buugyaraha xeerarka. Masiixiyaddu waa aaminsanaanta in Masiixu sameeyay wax kasta oo aan u baahan nahay in aan ku samayno Ilaah - wuuna ku sameeyay iskutallaabta. Waxaan "la heshiisiiyay Ilaah ... dhimashada wiilkiisa markii aan weli cadowgii ahayn" (Rooma 5,10). Isaga oo Masiixa Ilaah ku dhex jira ayaa adduunka kula heshiiyey "adoo nabad ku samaynaya dhiigiisa iskutallaabta" (Kolonel 1,20). Haddii aan isaga heshiis la galno, dembiyada oo dhan waa cafiyan yihiin (Aayadda 22) - Dib u heshiisiinta, is cafinta iyo cadaalada dhamaantood waa isku mid iyo wax la mid ah: nabad la noloshu.
Bawlos wuxuu u adeegsanayaa sawir xiise leh badbaadada markii uu qorey in Ciise "xaraashtay awoodaha iyo awoodaha awoodooda oo uu si cad u soo bandhigay oo ka dhigay inay ku guuleystaan ​​Masiixa [a. .: Iskutallaabta dhexdeeda] » (Kolonel 2,15). Wuxuu u adeegaa sawirka gaardiska militariga: kan guuleysta wuxuu muujiyaa maxaabiista cadawga ee socodsiinta guusha. Way hubaysan yihiin, waa la ixtiraamaa, waa la muujiyaa. Waxa Bawlos doonayo inuu halkaan ka sheego waa in Ciise waxan ku sameeyay iskutallaabta dusheeda.
Waxa u eg geeri sharaf dhac ah runtii waxay ahayd hanashada taajkii loogu talo galay qorshaha Ilaah, maxaa yeelay iskutallaabtiisa kaliya ayuu Ciise ku guulaystay inuu ka adkaado xoogagga cadaawada, Shaydaanka, dembiga iyo dhimashada. Sheegashadaada annaga naga dhan ah ayaa si buuxda ugu qanacday geerida dhibanaha aan waxba galabsan. Ma weydiisan karaan wax ka badan wixii markii hore la bixiyay. Geeridiisa, waxaa naloo sheegay, ciise wuxuu qaatay awooda "kii awooda ku lahaa dhimashada, oo ah Ibliiska" (Cibraaniyada 2,14). «... Wiilka Ilaah wuxuu u muuqday inuu baabi'iyo shuqullada Ibliis» (1 Yooxanaa 3,8). Guushaas waxaa lagu guuleystay iskutallaabta dusheeda.
Dhimashada Ciise waxaa sidoo kale lagu qeexay dhibane. Fikradda allabarigu waxay ka soo baxday dhaqankii hodanka ahaa ee allabarigii ee Axdigii Hore. Ishacyaah wuxuu Abuurahayaga ku tilmaamay "dhibane dambiile" (53,10). Yooxanaa Baabtiisaha wuxuu ugu yeedhay "Wanka Ilaah ee qaada dembiga dunida" (Yooxanaa 1,29). Bawlos wuxuu ku tusay inuu yahay dhibane dibuheshiisiin, oo uu yahay dhibane dambiile, sida wanka Wanka, iyo qurbaankii fooxa (Rooma 3,25; 8,3; 1 Korintos 5,7; Efesos 5,2). Warqadda Cibraaniyada waxay ugu yeeraysaa qurbaan dembi (10,12). Yooxanaa wuxuu ugu yeedhay allabari dib u heshiisiin "dembiyadeenna" (1 Yooxanaa 2,2; 4,10).
Waxaa jira magacyo badan oo waxa Ciise ku sameeyay iskutallaabta. Qoraayaasha Axdiga Cusub ee gaarka ahi waxay adeegsadaan ereyo iyo sawirro kala duwan tan. Xulashada saxda ah ee ereyada, habka saxda ah looma go’aaminayo. Muhiimadu waxay tahay inaan ku badbaadnay dhimashadii Ciise, in dhimashadiisa oo keliya badbaadada inoo furto. Nabiyadihiisii ​​ayaa ina caawiyey. Wuxuu u dhintay inuu ina xoreeyo, oo uu dembiyadeenna madaxfuro, oo uu ciqaabtayada ku xanuunsado, oo uu soo iibsado badbaadadeenna. «Gacaliyayaalow, haddii Ilaah sidaa inoo jeclaaday, waa inaan sidoo kale isjeclaanaa» (1 Yooxanaa 4,11).
Gaaritaanka badbaadada: Toddobo eray oo muhiim ah
Qanacsanaanta shaqada Masiixa waxaa lagu muujiyey Axdiga Cusub iyada oo loo adeegsaday sanamyo badan oo ah luuqadaha. Waxaan ugu yeeri karnaa sawirradan tusaalayaal, tusaalooyin, tusaalooyin. Mid kasta wuxuu sawirayaa qayb kamid ah sawirka:
Ransom (ku dhawaad ​​la socda "madax furasho"): Qiimaha la bixiyay si qof xor looga dhigo. Ahmiyadda la saarayaa waa fikirka xorta, ma aha nooca qiimaha.
Miyaad madax furasho: dareenka asalka ah ee ereyga sidoo kale wuxuu ku saleysan yahay “iska iibsi”, T. iibsashada xorta ah ee addoonka.
Caddaaladdu waa inaanu lahayn Ilaah hortiis oo aan wax dambi lagu lahayn, sida maxkamad horteed oo keliya.
Samatabbixin (Badbaadinta): Fikirka aasaasiga ahi waa xorayn ama badbaadin xaalad khatar ah. Waxaa sidoo kale jira bogsasho, bogsasho, dib u soo noqoshada guud.
Dib-u-heshiisiin: dib-u-dhisi xiriir burburay. Ilaah baa innaga heshiisiiya. Wuxuu u dhaqmaa si uu u soo celiyo saaxiibtinimada anaguna taladiisa ayaan qaadnaa.
Carruurnimada: Waxaan noqonnay carruurtii Ilaahay ee sharciga ahaa. Iimaanku wuxuu keenayaa isbadal ku yimaada xaalada guurkeena: dibadaha ilaa xubnaha qoyska.
Cafis: waxaa loo arki karaa laba siyaabood. Marka loo eego aragtida sharciga ah, cafiska macnaheedu waa baajinta deynta. Cafis shaqsiyadeed macnaheedu waa cafinida dhaawaca shaqsiyeedka (sida laga soo xigtay Alister McGrath, Fahmidda Ciise, bogga 124-135).